I-AulaGEO, elona khosi lilungileyo linikezela ngeengcali zobunjineli beGeo-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-AulaGEO, eyona khosi intle inikezela ngeengcali ze-Geo zobunjineli
AutoCAD-AutoDeskIiphotographycadastreIzifundo ze-AulaGEOUkufundisa i-CAD / GISGeospatial - GISGoogle umhlaba / imephuZobunjineliMicrostation-Bentleyqgis
I-AulaGEO sisindululo soqeqesho, esisekelwe kwi-Geo-engineering spectrum, kunye neebhloko zeemodyuli kulandelelwano lwe-Geospatial, Ubunjineli kunye neMisebenzi. Uyilo lwemethodological lusekelwe "kwiiNgcali zeeNgcali", ezijolise kubuchule; kuthetha ukuba bagxininise kuqheliselo, ukwenza imisebenzi kwiimeko eziphathekayo, kukhethwa imeko yeprojekthi enye kunye nenkxaso yethiyori eyomeleza oko kwenziwayo.
Iimpawu zekhosi yendlela ye-AulaGEO ibandakanya:
Ukufikelela kubomi bonke kumxholo wekhosi. Kuthetha ukuba banokuthathwa kwinqanaba lomfundi, kwaye bafikelele kumaxesha amaninzi njengoko kufuneka ngonaphakade.
Ifikeleleka kwizixhobo zefowuni.
Umsindo wachaza inyathelo ngenyathelo, njengodidi lwesiko.
Izixhobo zokukhuphela, ukusebenzisa iikhosi.
Iphuhliswe ngoochwephesha abanamava kwizifundo zabo.
Isiqinisekiso se-30 ukuba awonelisekanga sisifundo esithengileyo.
Amaxabiso afikelelekayo ngokupheleleyo.
Ifumaneka ngesiNgesi, ezinye zazo zinamaqhosha ezilwimi ezingaphezu kwe-15.
Ikwakhona ngolwimi lweSpanish.
Uphuhliso lwengqondo ye-AulaGEO echaza ngcono ubungakanani bunokubonwa kwigrafu, ephuhliswa kwiiphakheji ngolu hlobo lulandelayo:
Ingcali kwi-Geospatial Modelling.
Oku kubandakanya uqeqesho kwiiNkqubo zeeNkcukacha zeJografi, kusetyenziswa isoftware eyodwa yobunikazi (ArcGIS) kunye nesoftware yeQGIS yasimahla; kumanqanaba ayo aphambili kubandakanya ukuphuculwa kwesicelo sefowuni usebenzisa html5 kunye neGoogle API yeMephu.
Iinkqubo zoLwazi lweJografi ngeArcGIS 10
Funda iArcGIS Pro ngokulula
Funda advanced ArcGIS Pro
QGIS inyathelo ngenyathelo
QGIS + ArcGIS Pro Indlela ehambelana ngokufanayo kwikhosi enye
Ijolocation isebenzisa i-HML5 kunye neemephu zikaGoogle
Iwebhusayithi GIS kunye neArcPy
Iikhosi zinokuthathwa ngokukodwa, ngokwesidingo kunye namava osele unawo, okanye njengokomeleza kulwazi lwangaphambili.
Ingcali yokuvalelwa kude
Intshayelelo kwiiSensorer ezikude
Imodeli yezikhukula ne-HecRAS ukusuka ekuqaleni
Uhlalutyo kunye nemodeli yezikhukula ngeArcGIS HecRAS kunye neGeoRAS
Ikhosi kaGoogle yoMhlaba
Iikhosi ezikule modyuli zikwinqanaba eliphambili elinokuthathwa ngabasebenzisi abanamava kwizicelo ze-GIS, kodwa zikwalutshintsho olunomdla phakathi koyilo lwe-geospatial kunye nemisebenzi yoluntu. Kungenxa yoko le nto izifundo ze-Remcensing kunye ne-Hec-RAS zibandakanya uphononongo kusetyenziswa iArcGIS kunye neQGIS, kwaye ikhosi kaGoogle Earth ibandakanyiwe njengokulinganisa ngokubanzi.
Ingcali yokuyila imisebenzi yaseburhulumenteni
Iimodeli zomhlaba weDijithali. Le khosi ibandakanya inkcazo yeendlela zenkqubo yemifanekiso yokusebenza kweemodeli zedijithali kunye nokukhomba amafu kusetyenziswa imifanekiso, enjengefoto yomoya ethathwe ziinqwelomoya okanye iidroni. Kwikhosi, i-AutoDesk Recap, i-Such3D, iMeshLab, iSketchFab kunye neBentley ContextCapture zisetyenziselwa imisebenzi efanayo okanye eyongezelelweyo. Kubandakanya ukudala umphezulu usebenzisa amafu enqaku nge-Civil3D.
I-3D yeNqanaba le-1. Eli nqanaba lokuqala libandakanya ukulawulwa kweeNqaku, ukudalwa kobuso kunye nolungelelwaniso.
I-3D yeNqanaba le-2. Oku kusebenza nokudibanisa, umphezulu, amacandelo anqamlezayo kunye nokuphakama kwengqondo.
I-3D yeNqanaba le-3. Apha ungabona ulungelelwaniso kumanqanaba aphezulu kakhulu, kunye nokujonga umphezulu kunye namacandelo emnqamlezo.
I-3D yeNqanaba le-4. Ndisebenza nge-esplanade, i-draina drains, iiploti kunye neendlela zendlela zomsebenzi.
Amaqhinga e-CAD-GIS ene-Excel phambili kunye neMacros.
Ingcali ye-BIM kubuNjineli boNjiniya
Hlaziya iMEP. Apha sichaza ukufakwa kwezinto ezahlukeneyo zoyilo lweziseko zophuhliso, ezinxulumene neendlela zombane, ezomatshini kunye neendlela zombhobho.
Inkqubo yeHydrosanitary Systems. Le khosi ichaza inyathelo nenyathelo kulwakhiwo-ntathu lolwakhiwo kuzo zonke izinto zommandla wokubeka amanzi kwisakhiwo, ukunxibelelana kwayo kunye nokuveliswa kwezicwangciso zokugqibela.
Hlaziya i-MEP yeenkqubo zombane.
Hlaziya i-MEP yeesistim zochwephesha. Kuza ngokukhawuleza.
Hlaziya i-MEP yeenkqubo zokufaka imibhobho yamanzi. Kuza ngokukhawuleza.
Ingcali ye-BIM kubuNjineli boLwakhiwo
Le modyuli ibandakanya uyilo loyilo kusetyenziswa imigca emibini yesoftware: Ukuvuselela i-AutoDesk kunye neCSI ETABS.
Uyilo lolwakhiwo usebenzisa Uhlengahlengiso
Uyilo lwentsimbi, kusetyenziswa i-Advanced Steel
Uhlalutyo oluphambili kunye neRobhothi yeRakhi
Iiprojekthi zezakhiwo nge-AutoDesk.
Kwimeko ye-ETABS, uniko yile:
Uyilo lwezakhiwo ezixhathisa inyikima nge-ETABS, inqanaba loku-1.
Uyilo lwezakhiwo ezixhathisa inyikima nge-ETABS, inqanaba loku-2.
Ukugxila kuyilo lobume be-CSI kunye nee-ETABS.
Ulwakhiwo lolwakhiwo kunye ne-ETABS. Kuza ngokukhawuleza.
BIM Ingcali yoyilo lwezoBunjineli
Funda ukuphinda ulula
Izixhobo ze-BIM eziphambili kuYilo loYilo ngeRevit
Umvavanyi weProjekthi yeBIM
Gqibezela ikhosi yendlela ye-BIM. Le yikhosi egubungela umxholo wethiyori kunye neengqondo esebenzayo yolawulo lwendlela ye-BIM, kubandakanya imiba ye4D kunye ne-5D esetyenziswe kuhlahlo-lwabiwo mali kunye nokulinganisa kwenkqubo yokwakha.
I-BIM 4D isebenzisa i-Navisworks. Kungekudala.
Ezi zifundo zijolise kwabo balungiselela amanqanaba aphezulu kuyilo, ngokwembono yokungafikeleli kokwazi ikhowudi ethile yokwenza i-ETLS ekuhambeni kobunjineli. Yiyo loo nto kukhethwa ikhosi yokulinganisa kwinqanaba le-logic kunye ne-pseudocode, i-Ansys oludlelwane lwezinto ezinomda kuyilo lwejiyometri kunye ne-Dynamo efakwe kwiiprojekthi ze-BIM.
Uyilo kunye no-Ansys Workbench
Uyilo kunye nokulinganisa oomatshini kusetyenziswa uNastran. Kuza ngokukhawuleza.
Uyilo loomatshini kunye neCREO. Kuza ngokukhawuleza.
Uyilo kunye nokulinganisa usebenzisa iMatLab. Kuza ngokukhawuleza.
Ngamafutshane, i-AulaGEO yindlela entsha yoqeqesho, iikhosi ezizodwa ezijolise kubume beGeo-Engineering. Ibandakanya zombini iikhosi zoYilo, iMisebenzi yoLuntu, uyilo loLwakhiwo, iBIM kunye neeProjekthi zeGeospatial.
Kwipotifoliyo elandelayo ungacoca ngezifundo ngesihloko esiqhelekileyo.
Zonke iikhosiIikhosi-3D ModelingIikhosi-BIM MEPIikhosi-Ukusebenza kweBIMIikhosi-Ulwakhiwo lweBIMIikhosi-zooRhulumente baseKhayaIikhosi-zeGeospatialIikhosi-LandWorksIikhosi-Imveliso yobomi beMveliso
Kwiphothifoliyo elandelayo unokubona isoftware kunye nokuziphatha:
Zonke iikhosiIzifundo zeKhosiIzifundo ze-3Ds MaxIikhosi zeempenduloIzifundo zeArgGISIzifundo ze-AutoCADIikhosi ze-AutoDesk RecapIzifundo zeBlenderIikhosi zeLizwe 3DIikhosi ze-CREO zeParametricIzifundo ze-ETABSIzifundo zikaGoogle EarthIzifundo ze-HEC-RASIikhosi zeMicrostationIikhosi zeNkquboIzifundo zeQGISIikhosi zokuhlaziyaIikhosi zesketchup
I-AulaGEO iveza le khosi yokucacisa iprojekthi yendlu yokwenene ngeeNdonga zoLwakhiwo lweSakhiwo, kusetyenziswa eyona ...
Ngale khosi uya kuba nakho ukucacisa iprojekthi yendlu yokwenene ngeeNdonga zoLwakhiwo lweSakhiwo, usebenzisa esona sixhobo sinamandla ...
Ngale khosi uya kuba nakho ukuphuhlisa iprojekhthi yendlu yokwenene ngeeNdonga zoLwakhiwo lweSakhiwo, usebenzisa esona sixhobo sinamandla ...
Ngaba uyafuna ukufunda ukusebenzisa izixhobo ezibonelelwe yiArcGIS Pro, ukuqala ekuqaleni? Le khosi ibandakanya iziseko ze ...
Ingqondo ye-BIM yazalwa njengendlela yokusebenza yokumisela idatha kunye nokusebenza kweenkqubo ...
Le yikhosi equka inkqubela phambili yethiyori kunye nokusebenza kweZakhiwo zeNdonga yoKwakha. Iya kuchazwa apha ...
Inkqubo yoLwakhiwo lweMasonics nge-ETABS-Imodyuli 1
Le khosi iqulathe uphuhliso lwethiyori kunye nolusebenzayo lweeNdonga zoLwakhiwo. Yonke into enxulumene ...
Kule khosi uya kuba nakho ukuphuhlisa iprojekhthi yendlu yokwenene ngeeNdonga zoLwakhiwo lweSakhiwo, usebenzisa esona sixhobo sinamandla ...
Ngale khosi uya kuba nakho ukulungiselela iprojekthi yokwenyani yendlu eneendonga zokwakha, usebenzisa esona sixhobo sinamandla ...
Kule khosi ye-AulaGEO, ibonisa indlela yokulungiselela iprojekthi yokwenyani yezindlu kunye neendonga zokwakha, usebenzisa ...
I-AulaGEO inika le seti yeekhosi ezi-4 ezibizwa ngokuba yi-"Autocad Civil3D for Topography and Civil Works" eziya kukuvumela ukuba ufunde...
Iikhonsepthi ezisisiseko zezakhiwo zekhonkrithi, zisebenzisa i-ETABS Injongo yesifundo kukubonelela umthathi-nxaxheba kwizixhobo ezisisiseko ...
Uhlalutyo kunye noyilo lwezakhiwo - Inqanaba le-Zero kwinqanaba elihambileyo. Injongo yesifundo kukubonelela umthathi-nxaxheba ...
Uhlalutyo kunye noyilo lwezakhiwo ezichasene nenyikima: nge-CSI ETABS yesoftware Injongo yezi zifundo kukubonelela ...
Ikhosi ye-geolocation ye-Android-usebenzisa i-html5 kunye neemephu zikaGoogle
I-AulaGEO sisiphakamiso esakhelwe kule minyaka idlulileyo, sinika uluhlu olubanzi lwezifundo ...
Ikhosi kaGoogle yoMhlaba-ukusuka ekuqaleni
Yiba yingcali yokwenyani yeGoogle Earth Pro kwaye uthathe ithuba lokuba le nkqubo ngoku isimahla. Kubantu ngabanye, iingcali, ootitshala, ...
Funda kwinkqubo, iziseko ezisisiseko zenkqubo, iitshaneli kunye nepseudocode, iinkqubo ezivela ekuqaleni Izinto ezifunekayo: Iminqweno yokufunda Ukwazi ...
Isikhokelo esisisiseko sokwenza into yokulinganisa ngaphakathi kwinkqubo yokuphononongwa kwezinto ezincinci. Ngakumbi iinjineli ...
I-AulaGEO, izisa le khosi intsha ijolise kuyilo lwezixhobo, kusetyenziswa isoftware yeBentley's Microstran ...
I-AulaGEO izisa wonke umntu yikhosi yokwazisa yePython eya kuthi ivumele abafundi ukuba bakhangele izinto kunye nokufikelela ...
Ukongeza, isibonelelo sikwabandakanya iikhosi kwicandelo loyilo loMzobo kunye neOfisi.
Zonke iikhosiIikhosi zeAdobeIikhosi zoYilo loMzoboIikhosi zokufotaIzifundo zeOfisi
I-Adobe emva kweZiphumo -Funda ngokulula
I-AulaGEO iveza le khosi yeAdobe emva kweZiphumo, eyinkqubo engakholelekiyo eyinxalenye yeAdobe yokuQamba kwamafu ...
Ikhosi yeAdobe Illustrator -Funda ngokulula!
Le yikhosi eyodwa yoyilo lwegrafikhi esebenzisa iAdobe Illustrator. Ilungele abo bafuna ukufunda ukusebenzisa ...
Gqibezela ikhosi yeAdobe Photoshop yeAdobe Photoshop ngumhleli wezithombe ophuhliswe ziiNkqubo zeAdobe eziHlanganisiweyo. Ifotohop yenziwa kwi ...
IPowerPoint yinkqubo yeMicrosoft, eyenzelwe iimeko zeWindows kunye neMac OS. Isidingo ...
I-InDesign yisoftware yoyilo ekuvumela ukuba wenze zonke iintlobo zeeprojekthi zokuhlela ezinje ngeencwadi zezifundo, iincwadi zombane, ...
I-AulaGEO, ithi thaca le khosi kwiAdobe Suite, iNkulumbuso sesona software sisetyenziswa kakhulu emhlabeni ngokwenza ...
I-AulaGEO iveza le khosi yokufota kubo bonke abo bafuna ukufunda iikhonsepthi eziphambili zokufota, kunye nesicelo ...
I-AulaGEO izisa le khosi intsha apho uya kufunda ukufumana okuninzi ngaphandle kwe-Excel, esetyenziswe kumaqhinga nge-AutoCAD, Google Earth ...
Ngeli xesha sibonisa le khosi yenqanaba eliphakathi, ngakumbi ngokuyintloko siyithathela ingqalelo njengokuqhubeka kwenqanaba eliphambili. Kule...
Le yikhosi esebenzayo, ngokungathi uhlala phantsi nomhlobo akuxelele indlela yokusebenzisa iFilmora. Umhlohli ...
IMicrosoft Excel-ikhosi yenqanaba elisisiseko
Funda iMicrosoft Excel-ikhosi yenqanaba elisisiseko-yikhosi eyenzelwe bonke abo bafuna ukuqala kule ...
Ukuba oku kuya kuba njalo Athabathe ukundixelela ukuba sazibekela izifundo Cadastre for 2017 ngezi zihloko zilandelayo, esisiseko kunye wedijithali mphandle, GIS kunye Cadastral maxabiso, mapping esisiseko, GIS esisiseko, GIS lwesithuba esekelwe ze web based nendawo, uphuhliso ekuqaleni, uxilongo zendawo, izicwangciso OT nophuhliso.
Amaxabiso awapapashwa okwangoku. Sinethemba lokuzipapasha phakathi ku-Agasti.
Izindlela zokuhlawula zingaba kunye nokutshintshwa kwebhanki, i-Paypal okanye iKhadi leMatyala.
UJoseph Heriberto Monroy Aguilar uthi:
Ngomso kusasa, Nibingelela, buza malunga namaxabiso kunye nendlela yokuhlawula emva komnyuli wokuqala. mbulela kakhulu